खानामा तोरीको तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदाहरु | Tapaiko Khabar
आज : २०७६ असार २९ गते
खानामा तोरीको तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् फाइदाहरु
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : माघ २१, २०७५ शिक्षा-स्वास्थ्य
तोरीको तेलमा ६० प्रतिशत मोनोस्याचुरेटेड फ्याट मुफा, २१ प्रतिशत पोलीअनस्याचुुरेटेड फ्याट पुफा र १२ प्रतिशत स्याचुुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यी फ्याटी एसिडलाई असल फ्याट भनिन्छ । यी चिप्लो पदार्थ मुटुको धमनकिा भित्तामा गएर बस्न सक्दैन । यसमा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, भिटामिन र मिनरल पाइदैंन । तरकारीको महत्वपूूर्ण स्रोत भएकाले यसमा अल्फा लिनोलेनिक एसिड तथा ओमेगा फ्याटी एसिड हुन्छन् । एक चम्चा तोरीको तेलमा ०.८ ग्राम ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ । यस्तै, एक टेबलचम्चा तेलमा १२४ क्यालोरी पाइन्छ । जसमा १४ ग्राम फ्याट हुन्छ । जसमध्ये ८.३ ग्राम मोनोस्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ, जुन ओलिभ आयल, अंगुरको बियाँ र बदामको तेलजस्तै हुन्छ ।
तोरीको तेलमा मोनोस्याचुरेटेड र पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड प्रशस्तमात्रामा पाइन्छ । यसका साथै ओमेगा थ्रि र ओमेगा सिक्स फ्याटी एसिड पनि पाइन्छ । यी फ्याटी एसिडले मुटु रोगको खतरा ५० प्रतिशतले कम गर्न मद्दत पुु-याउँछन् । तोरीको तेल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक कोलेस्टेरोल घटाउने र हाइपोलिपिडेमिक लिपिड घटाउने तत्व पाइन्छ । यसले एलडीएल खराब कोलेस्टेरोल घटाई र एचडिएल असल कोलस्टेरोल बढाउँछ । यसबाट मुटु रोगको खतरा कम हुन्छ ।
यस भन्दा अगाडीअर्थमन्त्री चीनमा, चिनीयाँ राजदूतसँग भेटवार्ता
यस पछिकांग्रेसपछि अब प्रतिपक्षीको भूमिकामा समाजवादी फोरम आउँछ : सचेतक उमाशंकर
अमृतसमान तरकारी हो कुरिलो के के छन् त फाइदाहरु ?
आज असार १५ दहि चिउरा खाने दिन, स्वास्थ्यको लागि कति लाभदायक ?
सबै घरलाइ दाइजोको भारी चाहीएको छ गरीबलाइ पनि बेहुली अलङ्कारी चाहीएको छ।।...
नेपाल सरकारको आर्थिक लगानी र समुदायले आफ्नो रेखदेख तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्दै...
जीवन बीमा कम्पनीबाट पाउने रकमको लोभमा एक बुबाले आफ्नै छोरीको हत्या गरेका...